Ny kitapon'ny Vogt Medical dia misy amin'ny endrika maro, mba hahafahan'ny mpampiasa tsirairay misafidy ny kitapo mety ho an'ny famantarana mety. Mazava ho azy ny tombony: mpampitohy eran'izao tontolo izao, fanondranana tsotra ary valizy mikoriana, izay manakana ny reflux an'ny urine amin'ny tatavia ary manakana tsara ny aretina miakatra.
Ny kitapom-pako dia ampiasaina amin'ny fanangonana urine mivoaka amin'ny alàlan'ny catheter urinary
Ny kitapom-pako dia misy mpampitohy
Ny mpampitohy dia miantoka ny fifamatorana azo antoka amin'ny catheter urinary
Ny fantsom-panafahana tsy mahazaka kink dia mahazaka fametrahana ny kitapon-drano azo antoka
Ny slot mihamangatsiaka nohafanaina koa ny kitapo fisotrony ho azo antoka azo antoka
Vita avy amin'ny fitaovana mangarahara ho fanaraha-maso fanatsarana
Heparin cap (stopper injection), fitaovana fitsaboana fanampiny, dia ampiasaina matetika ho fomba fampidirana sy seranan-tsindrona, eken'ny besinimaro sy eken'ny andrim-pitsaboana. Ny satroka Heparin dia tena ara-dalàna amin'ny tsipika fitsaboana morden, mitana andraikitra lehibe tokoa izy io rehefa ampiasaina miaraka amin'ny kanula IV sy catheter vene afovoany. Ny satroka Heparin dia manana tombony maro samihafa toy ny: azo antoka, fanadiovana, fanindronana maharitra, famehezana tsara, boky kely, fampiasana mora, vidiny ambany, ny tombony voalohany dia ny famotsorana ny fanaintainan'ny marary / ratra mandritra ny tsindrona sy ny fampidirana azy.
Huaian Medicom dia mamokatra satroka heparin mandritra ny fotoana maharitra ary manome serivisy OEM any amin'ny firenena maro toa an'i TURKEY, PAKISTAN, POLAND, FRANTSAY, MALAYSIA ECT
Ampiasaina miaraka amin'ny cannula arterial sy venous.
Ny fampidirana ny Heparin-Sodium dia mety hisorohana ny reflux ny fifangaroan'ny ra.
Vita avy amin'ny kilasy fitsaboana PVC, mpampifandray iraisam-pirenena, tena tsara amin'ny fifanarahana bio.
Izy io dia adaptatera matevina, manana endrika tsara amin'ny tombo-kase, izay tsy miteraka famoahana.
Tena malama sy mora totofana, tsy misy sisiny sy zorony
Combi stopper (kombina famonoana kombina) Nampiasaina ho an'ny syringe azo ampiasaina; Miaraka amin'ny fisehoana mangatsiatsiaka sy tsy ampoizina; Cones famaranana, Luer Lock mety ho lahy sy vavy
Vita avy amin'ny kilasy fitsaboana PC na ABS, mpampitohy luer iraisam-pirenena, tena tsara amin'ny fampifanarahana bio
Izy io dia adaptatera matevina, manana endrika tsara amin'ny tombo-kase, izay tsy miteraka famoahana
Ler lock mihidy lahy sy vavy
Tsy misy additive simika eo anelanelan'ny singa, mba hampihenana ny fanentanana
Ny fitaovana dia azo ampiasaina ho an'ny marary rehetra izay ampidirina ny fitsaboana fampidirana. Tsy misy fetrany mifandraika amin'ny lahy sy ny vavy na ny taona. Combi-Stoppers dia azo ampiasaina amin'ny olon-dehibe, zaza ary zaza vao teraka.
Ny cannula intravenous (IV) dia fantsom-bokatra kely sy malefaka izay apetraka ao amin'ny iray amin'ireo lalan-dranao, matetika ao ambadiky ny tananao na amin'ny sandrinao. Mipetraka ao anatin'ny lalan-dranao ny tendrony iray ary ny tendrony iray hafa dia manana valizy kely izay toa somary mitapoka.
Misy sokajy telo lehibe samy hafa ny amin'ny iv, ary izy ireo dia Peripheral IVs, Central Venous Catheters, ary Midline Catheters. Ireo matihanina amin'ny fitsaboana dia manandrana sy mitantana ny karazana iv amin'ny fitsaboana sy tanjona manokana.
Ny torolàlana momba ny aretina US Centres for Disease Control dia manolo-kevitra ny fanoloana catheters intravenous peripheral intravenous (PIVC) tsy matetika noho ny 72 ka hatramin'ny 96 ora. Ny fanoloana mahazatra dia heverina fa mampihena ny loza ateraky ny phlebitis sy ny aretin-dra.
Stopcock telo lalana
Ampiasaina amin'ny fampidirana tsiranoka roa miaraka ary mitohy
fitaovana 6% luer mahazatra sy làlan-kiheba mifehy.
Link stopcock dia manana toerana kely maty mba hiantohana ny fitantanana zava-mahadomelina
Fihodinana paompy malefaka 360 degre, fanaporofoana ny tsindry hatramin'ny bara dimy ary mahazaka ny tsindry apetraka amin'ny fomba mahazatra.
Fanidiana mihidy lehilahy iray miaraka amin'ny rotator ary seranana roa misy kofehy manamora ny fifandraisana azo antoka sy azo antoka.
Suction Catheters avy amin'ny Cardinal Health dia manisy valizy fitarihana izay mampihena ny fahafahan'ny sputum maniry hampidina trauma. Ny zoro mahitsy ergonomika an'ny valva dia manatsara ny fampiononana ary ny tendrony DeLee dia mampihena ny fanaintainana sy ny mety haratra. Ny Suction Catheter dia mafy orina amin'ny fampidirana sy fanesorana mora, nefa azo ovaina ihany koa hitazomana ny suction mahomby. Ny valves miloko dia manampy amin'ny famantarana ny haben'ny frantsay an'ny Suction Catheters.
Ny catheter suction tracheal dia fitaovana fitsaboana manampy amin'ny famoahana ireo tsiambaratelo toy ny rora na ny tsiranoka avy amin'ny làlan-drivotra ambony. Ny tendrony iray amin'ny catheter dia mifamatotra amina milina fanangonana na milina suction. Ny tendrony hafa dia apetraka mivantana ao anaty fantsom-pandrika mba hamoahana ireo tsiambaratelo.
Ny catheter suction dia ampiasaina hitsentsitra ny sputum sy ny tsiranoka amin'ny lalan-pisefoana.
Ny kateter dia ampiasaina amin'ny fampidirana mivantana ao amin'ny tenda na amin'ny fantsom-panafody nampidirina ho an'ny fanatoranana
Ny fantsom-pisakafoanana dia fitaovana fitsaboana ampiasaina hanomezana sakafo mahavelona ny olona izay tsy mahazo sakafo amin'ny vavany, tsy afaka mitelina am-pilaminana, na mila famenon-tsakafo. Ny fanjakan'ny fantsom-pamokarana dia antsoina hoe gavage, fidirana amin'ny fidirana na famahanana fantsona. Ny fametrahana azy dia mety vetivety amin'ny fitsaboana ny aretina mafy na mandritra ny androm-piainana raha misy fahasembanana maharitra. Ny fantsom-piterahana isan-karazany dia ampiasaina amin'ny fampiharana ara-pahasalamana. Matetika izy ireo dia vita amin'ny polyurethane na silicone. Ny savaivon'ny fantsom-pisakafoanana dia refesina amin'ny tarika frantsay (ny unitiona frantsay dia mitovy unit mm). Izy ireo dia sokajiana amin'ny alàlan'ny tranokala fampidirana sy fampiasana ampiasaina.
Ny fampidirana fantsom-piterahana gastrostomy dia ny fametrahana fantsom-pisakafoanana amin'ny alàlan'ny hoditra sy ny rindrin'ny vavony. Miditra mivantana amin'ny vavony izy io. Ny vavony dia mampifandray ny esophagus amin'ny tsinay kely, ary miasa ho toy ny fitehirizana lehibe ho an'ny sakafo, alohan'ny fanaterana ny tsinay kely.
Ny catelers Nelaton sy urethral dia ampiasaina amin'ny catheterization mielanelana ary tena miavaka amin'ny mitaiza amin'ny cateter sy cateter ivelany. Ireo dia natao ho an'ny catheterization tatavia fohy. Ny catheterisation intermitente dia dingana iray izay ampidirana kateter ao anaty tatavia ho an'ny fivoahan'ny ranon'orana ary avy eo dia esorina avy hatrany. Ny fantson'ny kateter dia matetika mamakivaky ny uretra. Araraka ao anaty trano fidiovana, kitapo na urina ny urine. Ny catheterisation urethral miserana irery dia mahazatra, na izany aza, fanapahan-kevitra momba ny klinika noraisin'ny dokoteranao izany. Ny catheterization miserana dia azo atao na amin'ny fotoana fohy na amin'ny fotoana maharitra. Ny loza ateraky ny catheterization miserana dia ny aretin-kibo (UTI), ny fahasimban'ny urethral, ​​ny famoronana làlana diso ary ny fananganana vato tatavia amin'ny tranga sasany. Ireo katetika mitambatra dia manome fahalalahana amin'ireo kojakoja fanangonana izay tombony lehibe indrindra ho azy ireo ary omena torolàlana ho an'ireo izay manana tatavia neuropathique (asa tsy mitambatra sy tsy ara-dalàna).
Ny catetera Nelaton izay ampiasaina any amin'ny hopitaly dia fantsona mahitsy - toy ny kateter misy lavaka iray amin'ny sisin'ny tendrony ary mpampitohy amin'ny faran'ny fantsakana. Ny catelers Nelaton dia vita amin'ny PVC kilasy fitsaboana. Matetika izy ireo dia henjana na mafy mba hanampy amin'ny fampidirana ao amin'ny urethra. Lava kokoa ny catetera nelaton lahy noho ny kateter vavy; na izany aza, ny kateter lahy dia azo ampiasain'ny vehivavy marary. Izany dia satria fohy kokoa ny uretra vehivavy raha oharina amin'ny urethra lahy. Ny kateterana nilaton dia natao ho ampiasaina indray mandeha ary tokony hampiasaina fotsiny amin'ny catheterization miserana.
dia ampiasaina amin'ny catheterization mielanelana ary tena miavaka amin'ny mitaiza amin'ny kateter mipetraka sy kateter ivelany. Ireo dia natao ho an'ny catheterization tatavia fohy. Ny catheterisation intermitente dia dingana iray izay ampidirana kateter ao anaty tatavia ho an'ny fivoahan'ny ranon'orana ary avy eo dia esorina avy hatrany. Ny fantson'ny kateter dia matetika mamakivaky ny uretra. Araraka ao anaty trano fidiovana, kitapo na urina ny urine. Ny catheterisation urethral miserana irery dia mahazatra, na izany aza, fanapahan-kevitra momba ny klinika noraisin'ny dokoteranao izany. Ny catheterization miserana dia azo atao na amin'ny fotoana fohy na amin'ny fotoana maharitra. Ny loza ateraky ny catheterization miserana dia ny aretin-kibo (UTI), ny fahasimban'ny urethral, ​​ny famoronana làlana diso ary ny fananganana vato tatavia amin'ny tranga sasany. Ireo katetika mitambatra dia manome fahalalahana amin'ireo kojakoja fanangonana izay tombony lehibe indrindra ho azy ireo ary omena torolàlana ho an'ireo izay manana tatavia neuropathique (asa tsy mitambatra sy tsy ara-dalàna).
Tube fantsom-bala (catheter an-tendrony). Ny fomba nentim-paharazana, ary amin'ny tontolon'ny teknolojia ankehitriny izay tsy dia atahorana indrindra, dia ny fampiasana fantsom-piraketana Rectal tubes dia azo ampiasaina tsara sy mahomby mba hisorohana ny fahalotoan'ny marary mararin'ny fivalananan. Ny fampiasana fantsom-pandrosoana toy ny doka amin'ny fanasitranana sy ny fisorohana ny fery amin'ny tsindry amin'ny marary marary dia mila fandalinana bebe kokoa. Ireo kateter anaty trano (20 ka hatramin'ny 30 frantsay) ireo dia mifamatotra amin'ny kitapo fanamoriana am-pandriana,
Tube Tube malefaka sy kink mahatohitra, faritra ivelany malama, tsy dia fanaintainana; maso roa eo anilany miaraka amin'ny sisiny malama
Ny fantsom-panafody sy ny kateter dia atsofoka ao anaty vody lava mba hampidirana seza malalaka ao anaty kitapo fanangonana. Ny balaonina eo akaikin'ny tendron'ny kateter (ao anaty vatana) dia azo atsofoka raha vantany vao miorina ny catheter mba hisorohana ny fivoahan'ny fako manodidina ny catheter ary hisorohana ny fantsona tsy hivoaka mandritra ny fihetsiky ny tsinay.
Araka ny fomban-drazana, ny fantsom-piresahana dia apetraka amin'ny alàlan'ny sigmoidoscope henjana mba hahatratrarana ny fihenan'ny volon-tsolika sigmoid ary hampihena ny fiverenan'ny fotoana fohy. Ny sigmoidoscopy malefaka dia mety ho teknika azo antoka kokoa hahatratrarana ny famongorana, ary koa ahafahana mijery mivantana ny mucosa hanilihana ny ischaemia.
Yankauer napetraka dia ampiasaina amin'ny fitrohana ny tsiambaratelo oropharyngeal mba hisorohana ny faniriana. Ny Yankauer dia azo ampiasaina ihany koa hanadiovana ireo tranokala miasa mandritra ny fomba fandidiana ary ny habetsany nosokaina dia nisaina ho very ra nandritra ny fandidiana.
Ny tendron'ny sotroka Yankauer (tonony ny Yangkkow-er) dia fitaovana fitrohana am-bava ampiasaina amin'ny fomba fitsaboana. Matetika dia tendron-tsofina plastika mafy orina miaraka am-baravarana lehibe voahodidin'ny lohan'ny bulbous ary natao hamelana ny suction mahomby nefa tsy manimba ny sela.
Ity fitaovana ity dia ampiasaina hitrohana ny tsiambaratelo oropharyngeal mba hisorohana ny hetahetam-po. Ny Yankauer dia azo ampiasaina ihany koa hanadiovana ireo tranokala miasa mandritra ny fomba fandidiana ary ny habetsany nosokaina dia nisaina ho very ra nandritra ny fandidiana.
Novolavolain'i Sidney Yankauer amerikanina palaeontologist manodidina ny taona 1907 (1872–1932), ny fitaovana fitrohana Yankauer no nanjary fitaovana fitrohana fitsaboana mahazatra indrindra eran'izao tontolo izao.
Alikaola, Ny haben'ny lelan'ny fandidiana, Iv Catheter, Suction Catheter, Pads amin'ny alikaola, Tube fihinanan-jaza,